Tenga Canrenone poda (976-71-6) HPLC≥98% | AASraw
/ Products / MaR & D Reagents / Canrenone upfu (976-71-6)
Rating: SKU: 976-71-6. Category: MaR & D Reagents
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika kuhuwandu hweCanrenone powder (976-71-6), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Canrenone powder yakashandiswa mumayero e2 × 82 mg uye 2 × 164 mg pazuva pazuva re10 kune vane chirwere cheshuga vasina hutano, chiropa kana kushaya mafungiro. Aldosterone excretion uye plasma aldosterone yakawedzera zvishoma munguva dzehurumende dzose mbiri.
Molecular Kurema: 258.36
ZVACHOKWADI (S): Canrenone poda
ZITA ROKENZERA (S): Contaren, Luvion, Phanurane, Spiroletan
Plasma mazinga eCanrenone poda uye 'yakazara metabolites' mushure megasi hydrolysis yakafananidzwa mune vadiki nevakuru zvidzidzo zvichitevera imwechete uye yakawanda doses ye spironolactone. Mushure mekutanga kwedosi paZuva 1, mwero weplasma weCanrenone poda yakasviba uye 'yakazara metabolism' yaive akakwirira mune vechidiki kupfuura muboka revakuru, uye misiyano yakakura yakawanikwa pakati pemazera maviri emakore muAUC kune ese Canrenone powder uye 'yakazara metabolites '. Zvisinei, misiyano iyi pakati pemazera maviri aya yakadzikira mushure mekuwedzera dosing paZuva 8, uye mamiriro akatsiga pre-dose plasma mazinga eCanrenone mbishi yakasviba uye 'yakazara metabolites' yaive akakwirira zvakanyanya mune vakwegura zvidzidzo. Iko kuunganidzwa kuenzana kweCanrenone poda uye 'yakazara metabolites' yaive akakwirira zvakanyanya kune vakwegura kupfuura muzvidzidzo zvidiki. Ose ari maviri Canrenone poda yakasviba uye canrenoic acid yaive yakasungwa zvakanyanya kune mapuroteni eplasma, asi hapana misiyano yakawanikwa pakati pemapoka emakore maviri mumapuroteni anosunga. Kucherekedza misiyano mumazinga eplasma mushure meimwe uye yakawanda dosing pakati pevechidiki nevakuru zvidzidzo zvinogona kuve mhedzisiro yezvinhu zvakawanda sekuchinja kwakaringana mumetabolism nezera; kutadza kunwa kwemuromo kwekomboni yemubereki; uye / kana yakachinja vhoriyamu yekuparadzirwa kwemushonga.
Ndeipi inonzi Canrenone powder
Muchirevo, kakawanda, 50-200 mg pazuva nezuva kana imwe nharaunda kana mune huwandu hurumende yakakwana.
Mumatambudziko akakomba, muyero wokutanga unogona kuwedzerwa kusvika ku 300 mg kana kupfuura, ipapo chirwere chinoshandiswa kuchipatara uye mairasi e laboratori.
Canrenone poda inoshanda sei
HPLC maitiro ekusimudzirwa kwemaitiro ekufambisa akaitwa paTQ4 Quantum Discovery katatu quadrupole mass spectrometer neAria CTC HPLC autosampler system. Pasi pemagetsi e-electrospray ionisation iyo ionisi yakawanda yakaonekwa yaiva protonated molecular ion (M + H) + m / z 341 yeCanrenone powder. Alfaxalone (chinyararire ion m / z 333; 1 μg) yakashandiswa sezviri mukati. Pasi pekushongedzwa kwekushandiswa, maikamu makuru akasiyana aiva m / z 107.1 uye 91.1 yeCanrenone poda yakasviba uye m / z 297.3 uye 315.3 ye alfaxalone. Ion kuparadzaniswa yakashandiswa sequantifier uye inofananidzira ions nenzira imwecheteyo kuwedzera zvakananga kumeso. Kuparadzanisa kwakakwana kwe-steroid kwakagadzirwa kuburikidza neammonium acetate (5 mM) / methanol pa (60: 40, 0.3 ml / min) pane Mvura C18 T3 Atlantis HPLC chinyorwa (3 μm; 100 × 2.1 mm) pa 25 ° C. Chidimbu chinokwira kubva ku40 kusvika ku 90% methanol chakashandiswa, uye nguva yakazara ye 8 maminitsi.
Kuzadzikiswa kwehuwandu hwemiganhu yakagadzirwa uchishandura zvinyorwa zvitanhatu uye zvepakati. Zvinyatsogadziriswa zveCanrenone powder neAlfaxalone (106.2% (yakafanana yokuparadzanisa (RSD) 9.5%) uye 102.2% (RSD 4.7%)) yakawanikwa kuburikidza nehuwandu hwemvura-yeji ye25 μl plasma neEthyl acetate (1: 10). Muganhu wekucherechedza waiva 5 ng / ml uye muganhu wekuwedzerwa wakanga uri 15 ng / ml. Iyo mbongoro yaive yakarongeka (r = 0.9936) pamusoro pehuwandu hwezvikamu (5 ng / ml kusvika 5 μg / ml). Iyo mbongoro yakaratidza kuti yakakodzera kuwanda kweCanrenone yaibaya poda muboka revarwere vakange vagamuchira 400 mg dose, mavari mukati memaplasma vakawanikwa vari mumuganhu we 5-45 μmol / l.
Kubatsirwa kweCanrenone powder
Canrenone powder ndiyo inoshandisa metabolite ye spironolactone. Neanoratidziro yakarongeka, inoshanda mukukwikwidzana nealdosterone nokuipedza kubva kune nzvimbo dzinogamuchirwa kune imwe nzvimbo ye distal chikamu chechibhakera chekubata uye chekutakura duct; izvi zvinoguma nokuwedzera mu diuresis uye natriuresis uye kuderedzwa kwechiriurusiis. Kuenzaniswa ne spironolactone kune zvakakosha ye latency yenguva. Sezvakaita spironolactone, zvisinei, haina chiito mune zvidzidzo zvinongodzokorodzwa kana muzvidzidzo zvakajairika nechepasi aldosterone secretion.
Mushure mokunge mutauriro wenyaya uchitaura, Canrenone yakasvibiswa pfumbi inokurumidza kukurumidza, inosvika pakuwanda kwema plasma mukati maawa maviri okutanga. Iyo hafu-hupenyu inenge maawa e18 uye, kusiyana ne spironolactone, yakasimbiswa isina kuchinjwa, mukati meawa 72, nemuguta nemafuta zvakaenzana nezana.
Canrenone poda inoratidzirwa mumamiriro ekurapa umo kuwedzerwa kweeldosterone kunounza kuchengetwa kwemvura uye sodium uye kuwedzerwa kweuriuria. Iyo inobatsira mukurapa kwe ascites mu cirrhosis yechiropa, kunyange kana muyero uri kuramba uchishandurwa kusvika mhinduro mune imwe nyaya.
Canrenone mbiriso yakashambadzira Marketing
Canrenone pfupa rekushona
Canrenone poda yakasanganiswa inoshandiswa metabolite ye spironolactone, canrenoic acid, uye potassium canrenoate, uye inofungidzirwa kuti inokonzerwa nemigumisiro yayo. Yakawanikwa kuti inofanirwa kuenzaniswa neA10 kusvika ku25% ye potassium-sparing effect ye spironolactone, asi imwe metabolite, 7α-thiomethylspironolactone (7α-TMS), inobatanidza 80% ye potassium-kupera simba kwechirwere.
Canrenone powder inonzi yakanyanya seyakasimba se antimineralocorticoid inosangana ne spironolactone, asi haina kunyanya kudarika uye inoshanda se antiandrogen. Saizvozvowo ne spironolactone, Canrenone poda yakasviba inhibits steroidogenic enzyme yakadai se11β-hydroxylase, cholesterol-side-chain cleavage enzyme, 17α-hydroxylase, 17,20-lyase, uye 21-hydroxylase, asi zvakare, hazvienzaniswi zvishoma pakuita kudaro.